ပြည်သူ့မော်ကွန်း - ကလေးများများအတွက်အွန်လိုင်းအဘိဓါန်
ဧပြီလ 22, 2016 ဧပြီလ 22, 2016 by ကလေးတွေကအဘို့အဘိဓါန်
57 ။ ဦးနှောက်; 58 ။ ကျောရိုး 59 ။ လည်ချောင်း; 60 ။ 61 windpipe ။ အစာပြွန်
62 ။ ကြွက်သား; 63 ။ အဆုတ်; 64 ။ နှလုံး 65 ။ အသည်း; 66 ။ အစာအိမ်; 67 ။ အူ
68 ။ သွေးကြော; 69 ။ သွေးလွှတ်ကြော, 70 ။ ကျောက်ကပ် 71 ။ ပန်ကရိယ, 72 ။ စည်ပေါင်း
61 ။ ဦးနှောက်; 62 ။ လည်ချောင်း; 63 ။ အစာပြွန် 64 ။ လေပြွန်;
65 ။ ကျောရိုး; 66 ။ အဆုတ် 67 ။ နှလုံး; 68 ။ အသည်း; 69 ။ သည်းခြေနှင့်ဆိုင်သော
70 ။ အစာအိမ်; 71 ။ အူမကြီး; 72 ။ အူသိမ်
73 ။ ကြွက်သား; 74 ။ သွေ့ခြောက်သောအရိုး; 75 ။ ပန်ကရိယ
76 ။ ကျောက်ကပ်, 77 ။ ဆီးအိမ်, 78 ။ 79 veins ။ သွေးလွှတ်ကြော
အကှေ့, အာခေါင်, လျှာ, အသံအိုး, အာဒံရဲ့ပန်းသီး, Vocab ကြိုး, လည်ချောင်း, ဦးနှောက်, pharynx, epiglottis, အစာပြွန်
အသည်း, duodenum, ကျောက်ကပ်, ပန်ကရိယ, အူသိမ်, အူမကွီး, နောကျဆကျတှဲ, သိုင်းရွိုက်ဂလင်း, လေပြွန်, အဆုတ်, နှလုံး, အစာအိမ်, splleen
မတ်လ 8, 2018 ဧပြီလ 9, 2014 by ကလေးတွေကအဘို့အဘိဓါန်
1 ။2ဦး။3လက်နက်။ နောက်ကျော4။5ခါး။ တင်ပါး / backside6။ ခြေထောက်7။ 8 ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ သေတ္တာ
9 ။ 10 အစာအိမ်။ တင်ပါးဆုံရိုး 11 ။ လက် 12 ။ ခြေလျင်
13 ။ မျက်စိ 14 ။ မျက်ခုံး 15 ။ နှာခေါင်း 16 ။ ပါးစပ် 17 ။ မေးစေ့
18 ။ ဆံပင် 19 ။ နားကို 20 ။ နှုတ်ခမ်း 21 ။ လည်ပင်း
22 ။ 23 ကျလိုကျတယျ။ လက်မ 24 ။ 25 လက်ချောင်းများ။ လက်ကောက်ဝတ်
26 ။ 27 အုန်း။ ပခုံး 28 ။ 29 လက်ဖျံ။ အထက်လက်မောင်း 30 ။ တတောင်
31 ။ ဒူး 32 ။ 33 ပေါင်။ 34 Shin ။ နွားသငယ်ကို 35 ။ ခြေကျင်း 36 ။ 37 ပေါ်သို့။ ခွေခြောငျး
1 ။ နဖူး2။ ဗိမာနျတျော3။ မျက်ခုံး4။ မျက်ခွံ5။ မကျြတောငျမှေး
6 ။ ကျောင်းသား7။ ပါး
8 ။ အံသွား9။ သွား 10 ။ လျှာကို 11 ။ ဦးနှောက် 12 ။ လည်ချောင်း
13 ။ 14 သွေးပြန်ကြော။ သွေးလွှတ်ကြော 15 ။ အဆုတ် 16 ။ အသည်း 17 ။ 18 အစာအိမ်။ အူမကြီး
19 ။ သေးငယ်တဲ့ intstine
20 ။ ကြွက်သား 21 ။ အဆုတ် 22 ။ နှလုံး 23 ။ ကြောကျကပျ
24 ။ အရိုးစု 25 ။ ဦးခေါင်းခွံ 26 ။ နံရိုး 27 ။ breastbone / sternum
28 ။ ကျောရိုး / ကျောရိုး 29 ။ hip-အရိုး 30 ။ တင်ဆုံ
31 ။ ဒူးခေါင်းရိုး
1 ။ မျက်နှာ;2။ ပါးစပ်;3။ မေးစေ့;4။ လည်ပင်း;5။ ပခုံး;6။ လက်မောင်း;
7 ။ အထက်လက်မောင်း; 8 ။ တံတောင်ဆစ်,9။ လက်ဖျံ; 10 ။ ဂျိုးကြား; 11 ။ ကျော;
12 ။ ရင်ဘတ်; 13 ။ ခါး; 14 ။ ဝမ်းဗိုက်;
28 ။ ပခုံး 29 ။ ရင်ဘတ် 30 ။ ဝမ်း
15 ။ တင်ပါး; 16 ။ တင်ပါးဆုံရိုး, 17 ။ ခြေထောက်;
18 ။ ပေါင်; 19 ။ ဒူး; 20 ။ နွားသငယ်,
31 ။ ကျော; 32 ။ လက်မောင်း; 33 ။ 34 ဂျိုးကြား။ တံတောင်ဆစ်, 35 ။ ခါး
36 ။ တင်ပါးဆုံရိုး, 37 ။ နွား; 38 ။ ခြေထောက် 39 ။ ပေါင်; 40 ။ ဒူး;
41 ။ နွားသငယ်ကို 42 ။ ညို့သကြီး
ဦးခေါင်းခွံ, ဗိမာနျ, နား, နဖူး, မျက်နှာ, အာဒံရဲ့ပန်းသီး, ပခုံး, နို့သီးခေါင်း, ရင်သား, ဂျိုးကြား, thorax, ခါး, ဝမ်းဗိုက်, ဆီးခုံမို့မို့, ပေါင်ခြံ, ဒူး, ခြေလျှင်ခြေချောင်း, ခြေကျင်း, instep
MAN POSTERIOR VIEW
ဆံပင်, ဦးခေါင်း, nape, လည်ပင်း, ပခုံးဓါး, လက်မောင်း, နောက်ကျော, တံတောင်ဆစ်, ခါး, ပင်စည်, တင်ပါးဆုံရိုးလက်ဖျံ, လက်ကောက်ဝတ်, ခါးကို, လက်, ပေါင်, တင်ပါး, နွားသငယ်, ခြေထောက်, ဖနောင့်, ခြေလျင်
မျက်စိ, နှာခေါင်း, ပါး, မေးစေ့, ပါးစပ်, လည်ပင်း, ပခုံး, ဂျိုးကြား, ရင်သား, thorax, ခါး, ဝမ်းဗိုက်, publs, ပေါင်ခြံ, ဒူး, ခြေမ, ခြေကျင်း, ခြေချောင်း
လူ့ခန္ဓာကိုယ်မိန်းမ POSTERIOR VIEW
ဆံပင်။ nape, ဦးခေါင်း, လည်ပင်း, ပခုံးဓါး, လက်မောင်း, တံတောင်ဆစ်, နောက်ကျော, ခါး, ပင်စည်, ခါးကို, တင်ပါးဆုံရိုး, လက်ဖျံ, လက်ကောက်ဝတ်, လက်, တင်ပါး, ပေါင်, ခြေထောက်, နွားသငယ်, ခြေမ, ဖနောင့်။
Boy, GIRL ကလေးများ BODY
ဦးခေါင်း, လက်မောင်း, ရင်ဘတ်, အစာအိမ်, ဒူး, ခြေထောက်
ခြေကျင်း, ဖနောင့်, ခြေလျှင်ခြေချောင်း, လက်ကောက်ဝတ်, လက်မ, လက်, လက်ချောင်း
30 ။ ဆံပင်; 31 ။ စိတျအပိုငျး; 32 ။ နဖူး, 33 ။ sideburn; 34 ။ နားကို;
35 ။ ပါး; 36 ။ နှာခေါင်း; 37 ။ နှာခေါငျး; 38 ။ မေးရိုး; 39 ။ မုတ်ဆိတ်;
40 ။ နှုတ်ခမ်းမွှေး; 41 ။ လျှာကို; 42 ။ သွား; 43 ။ နှုတ်ခမ်း;
1 ။ ဦးခေါင်း;2။ ဆံပင်;3။ နဖူး4။ ဗိမာနျ,5။ မျက်နှာ
13 ။ နားကို; 14 ။ 15 earlobe ။ နှာခေါင်း; 16 ။ နှာခေါငျး; 17 ။ ပါး
18 ။ မေးရိုး; 19 ။ ပါးစပ်; 20 ။ 21 နှုတ်ခမ်း။ သွား-အံသွား; 22 ။ လျှာကို; 23 ။ မေးစေ့
24 ။ sideburn 25 ။ 26 mustache ။ မုတ်ဆိတ် 27 ။ လည်ပင်း
မျက်နှာ, ဆံပင်, အသားအရေ, မျက်ခုံး, မကျြတောငျမှေး, နား, နှာခေါင်း, မှဲ့, နှုတ်ခမ်း, မေးစေ့, နဖူး, ဗိမာနျ, မျက်စိ, ပါး, နှာခေါငျး, ပါးစပ်, မေးရိုး
လူရွှင်တော်ဦးခေါင်းကို: နဖူး Hai မျက်စိမျက်ခုံးစစ်ဆေးမှုများနောဧနှုတ်ခမ်းပါးစပ်လျှာကို
နဖူး, မျက်ခုံး, ပါး, နှုတ်ခမ်း, သွားတွေ, မေးစေ့
နှုတျခမျးမှေး, နှုတျခမျးမှေး, နား, မုတ်ဆိတ်
44 ။ မျက်ခုံး ;; 45 ။ မျက်ခွံ; 46 ။ မျက်တောင်;
47 ။ မျက်ဝန်း; 48 ။ ကျောင်းသား;
6 ။ မျက်လုံး;7။ မျက်ခုံး; 8 ။ မျက်ခမ်း
9 ။ မျက်တောင်; 10 ။ မျက်ဝန်း; 11 ။ ကြောငျးသား
12 ။ မျက်ကြည်လွှာ
21 ။ လက်ကောက်ဝတ်; 22 ။ လက်ခေါက်ဆစ်; 23 ။ လက်ချောင်း; 24 ။ လက်မ;
25 ။ (လက်ညိုး; 26 ။ လက်ခလယ်;
27 ။ လက်သူကြွယ်; 28 ။ နည်းနည်းလက်ညှိုး; 29 ။ စွန်ပလွံ;
43 ။ လက်; 44 ။ လက်ကောက်ဝတ်; 45 ။ လက်မ
46 ။ (လက်ညိုး; 47 ။ လက်ခလယ်
48 ။ လက်သူကြွယ်; 49 ။ pinky / အနည်းငယ်သာလက်ချောင်း
50 ။ စွန်ပလွံ; 51 ။ လက်ချောင်း; 52 ။ လက်ခေါက်ဆစ်
သဘောဖွငျ့ ORGANS- TOUCH -HAND
စွန်ပလွံ, လက်ခလယ်, တတိယကိုလက်ညှိုး, လက်သန်း, လက်ညှိုး, လက်သည်း, လက်မ, lunula, လက်ကောက်ဝတ်
လက်စွပ်ကိုလက်ညှိုး, လက်ခလယ်, လက်ညှိုး, လက်သန်း, လက်ကောက်ဝတ်, ထန်း, လက်မ, လက်သည်း, cuticle, လက်ခေါက်ဆစ်
49 ။ ခြေချင်းဝတ်; 50 ။ ဖနောင့်; 51 ။ instep; 52 ။ ဘောလုံးကို;
53 ။ ကြီးမားသောခြေချောင်း; 54 ။ ခြေချောင်း; 55 ။ နည်းနည်းခြေချောင်း; 56 ။ ခွေသညျး;
53 ။ ခြေလျင်; 54 ။ ခြေချင်းဝတ်; 55 ။ ဖနောင့်; 56 ။ ခွေခြောငျး
57 ။ နည်းနည်းခြေချောင်း; 58 ။ ကြီးမားသောခြေချောင်း; 59 ။ ခွေသညျး
60 ။ အသားအရေ
ခြေချောင်း, ဘောလုံး, ဝါး, instep, မဟာ, ဖနောင့်, ကြီးမားတဲ့ခြေချောင်း, တံတား, ခွေသညျး, နည်းနည်းခြေချောင်း, ခြေကျင်း
ခြေကျင်း, Aorta, Back နောက်ပြန်, ကိုက်, အပြာရောင် + မျက်လုံး, ခန္ဓာကိုယ်, ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ, အရိုး, ဦးနှောက်, Brown ကမျက်လုံး, Butt, နွားသငယ်, နွားသငယ်, ကာတွန်းမျက်လုံး
Cerebellum, ပါးသွယ်ပါး, ချင်း, ချို, နား, နားကိုက်
Ealobe, ears က, တံတောင်ဆစ်, မျက်လုံး, မျက်ခုံး, မျက်တောင်, မျက်ခမ်း, မျက်လုံး, Finger
လက်သည်း, Fingers ကူး, လက်သီးဆုပ်, Foot, ခြေရာများ, နဖူး, အစိမ်းရောင်မျက်လုံး, လက်, ဦးခေါင်း, ဖနောင့်
ဒေါက်, Hip လူ့နှလုံး, Vena cava, မေးရိုး, ကျောက်ကပ်, ကျောက်ကပ်, Kiss, ဒူး, ရင်ခွင်, ခြေထောက်ယုတ်ညံ့, နှုတ်ခမ်း
အသည်း, အဆုတ်, ပါးစပ်, ကြွက်သား, နှုတ်ခမ်းမွှေး, လည်ပင်း, နှာခေါင်း, အိုကေ, အုန်း
Pituitary gland, ကိုယ်ဝန်ဆောင်, အဆုတ်အခြေအနေမှာအကြမ်းဖျင်း, ဖိအားပေးရန်လက်, နံရိုး, ပွတ်သပ် Tummy, အရိပ်, ပခုံး, လေ့လာကြရအောင်, ဦးခေါင်းခွံ, အပြုံး, ကျောရိုး
ကျောရိုး, အစာအိမ်, Superior Vena cava, မြည်းစမ်း, သွား, သိမှတ်ဖွယ်တိုး, ခြေချောင်း, လျှာ, ဘက်မှာလျှာ, ဘက်မှာလျှာ, လျှာထဲကလျှာ Up ကို, ဂလင်းတမျိုး, သှား
Touch ကို, Unibrow, Uvula, Wrish, X-ray
အယ်လ် cuerpo humano en diccionario က de imágenes
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား လူပုဂၢဳိလ္မ်ား37 မှတ်ချက်
နေ့စဉ် Routine- မူလစာမျက်နှာလှုပ်ရှားမှုများ - နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလှုပ်ရှားမှုများ - အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများ
မတ်လ 10, 2017 ဇန်နဝါရီလ 12, 2014 by ကလေးတွေကအဘို့အဘိဓါန်
နေ့စဉ် Routine- မူလစာမျက်နှာလှုပ်ရှားမှုများ - ပြည်သူ့ - ဓာတ်ပုံအဘိဓါန်
1 ။2နှိုး။3တက်ရ။ သင်၏မျက်နှာကိုဆေးကြောပါ
4 ။ သင်၏မျက်နှာကို5သုတ်ခြင်း။ သင်၏မျက်နှာကို / သင်ကိုယ်တိုင်6ခန်းခြောက်။ သင့်ရဲ့သွားတိုက်
7 ။ ရေချိုးခန်း 8 ယူပါ။9ရိတ်။ ဝတ်ဆင် 10 ရ။ သင့်ရဲ့ဆံပင်ဖြီး
11 ။ လုပ်-up, 12 အပေါ်ထားတော်မူ၏။ နံနက်စာ 13 ကိုစားကြလော့။ ကော်ဖီ 14 တစ်ခွက်ကိုရှိသည်။ အလုပ်သို့သွားပါ
15 ။ (တီဗီ) 16 စောင့်နေကြလော့။ ကိုဖတ်ပါ (စက္ကူ) 17 ။ ရေဒီယို 18 နားထောင်ကြလော့။ ရေချိုးသည်
19 ။ သင့်ရဲ့ဆံပင် 20 တိုက်။ အိပ်ရာ 21 သွားပါ။ အိပ်
ချက်ပြုတ် / ညစာအောင်
အစာစား / နံနက်စာများ
အစာစား / နေ့လည်စာများ
အစာစား / ညစာရှိ
123 ငါ၏အ * မျက်နှာဆေးကြောပါဝတ်ဆင်ရရိတ်456ငါ၏အ * သွားတိုက်နေတဲ့ရေချိုးခန်းယူတက်ရ
7 8 ငါ၏အ * ဆံပင်9ငါ၏အ * ဆံပင် 10 အိပ်ရာအောင်ဖြီးတိုက်မိတ်ကပ်ပေါ်တွင်တင်
* ငါ့အသည်, မိမိ, သူမ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့, သင့်, သူတို့ရဲ့
11 12 နံနက်စာစေ 13 အိပ်ရာ 14 အိပ်ပျော်ခြင်း 15 ကိုသွားမယ့်ရေချိုးယူသုတ်သင်ရ
16 နေ့လယ်စာ 17 ထမင်းချက်လုပ် / ညစာ 18 ကိုစားစေ / နံနက်စာများ
19 ကိုစား / နေ့လယ်စာ 20 ညစာရှိ / ကိုစားပြီ
အဆိုပါစလောင်းများကိုလျှော် 1 အိမျရေချိုးခန်းလုပျ2clean / တိုက်ခန်း clean 3
4 သံ567ခွေး 8 လေ့လာမှု9အလုပ်ကိုသွားလမ်းလျှောက်ကြောင်အစာကျွေးကလေးအစာကျွေး
10 11 ကျောင်းကို 12 အလုပ်ဖို့ဘတ်စ်ကားယူလုပ်ကိုင်ဖို့ကျောင်းကို 13 drive ကိုသွားပါ
14 15 အိမ်ပြန်ရ / အိမ်ပြန်လာစတိုးဆိုင်ကိုသွား 16 ခွင့်အလုပ်
1 လက်ပတ်နာရီတီဗီ234သတင်းစာကိုဖတ်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်ဂီတ5စကားကိုနားထောငျရေဒီယိုကိုနားထောင် |
678 ဘတ်စကက်ဘော9ဂစ်တာ 10 စန္ဒရား 11 လေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်ကစားကစားကတ်များ play play
12 ရေကူး 13 စက်ရုံပန်းပွင့်အပန်းဖြေ 14 စာတစ်စောင်ရေးဖို့ကွန်ပျူတာ 15 ကိုအသုံးပြုဖို့ 16
activities- သွန်း, ဖမ်း, အသားတင်အတွက် reel, ဖြန့်ချိ
activities-, သုတ်, ဆေးကြောပါ, သန့်ရှင်း scrup, ခြစ်, မောင်း, ဖုန်မှုန့်, အရောင်
activities- စက်ဘီးစီးခြင်း, ရွရွပြေး, စကိတ်ဘုတ်စီးခြင်း, rollerblading, ငှက် Watch, ဇက်ကြိုးလမ်းကြောင်းကို, မြင်းစီးခြင်း, တောင်တက်, ပျော်ပွဲစား
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား လူပုဂၢဳိလ္မ်ား9 မှတ်ချက်
1 Hello./Hi ။2ကောင်းမွန်သောနံနက်။3မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်း။4ညနပေိုငျးကောင်း။5သင်ဘယ်လိုရှိပါသလဲ / သင်သည်ဘယ်လိုလုပ်နေကြတာလဲ6Fine./Fine, thanks./Okay ။7အသစ်ကဘာလဲ? / သင်တို့နှင့်အတူသစ်ကိုဖွင့်အဘယျနညျး 8 လွန်း much./Not မဟုတ်။
9 Good-bye./Bye ။ 10 ကောင်းသောညပါ။ 11 သင်သည်မကြာမီသငျသညျကိုကွညျ့ပါ later./ ကိုကြည့်ပါ။
မင်္ဂလာပါ 12 ။ ငါ့နာမကိုဟိုင်း ...... ဖြစ်ပါတယ်။ ငါက………။ သငျသညျတွေ့ဆုံရန် 13 Nice ။ လွန်း, သင်တွေ့ဆုံရန် 14 Nice ။ ငါမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် 15 ... .. ဒါက ......... ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ဦးကဖွင့်အာရုံစူးစိုက်မှု ဖော်ပြ. ကျေးဇူးတင်ကြောင်းရယူခြင်း
16 ငါ့ကို Excuse ။ 17 ငါမေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးလို့ရမလား? 18 you./Thanks ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ 19 သင်ကကြိုဆိုပါတယ်။
သင်ကတယ်လီဖုန်းပေါ်မှာတစ်စုံတစ်ယောက်က Calling နားလည်ခြင်းမရှိကြနှင့်ဟု
20 ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး understand./ ပါဘူး။ ကျွန်မနားမလည်ကြဘူး။ 21 သင်ပြန်လုပ်ကျေးဇူးပြုပြီးနိုင်သလား? / သင်သည်နောက်တဖန်သည်ဟုဆိုကျေးဇူးပြုပြီးနိုင်သလား? မင်္ဂလာပါ 22 ။ ဒါဟာ ......... ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ ......... အားဟောပြောကျေးဇူးပြုပြီးလို့ရမလား? ဟုတ်ကဲ့ 23 ။ ခဏအပေါ်ကိုင်ထားပါ။ ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး 24 ......... အခုကဒီမှာ .isn't ။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား လူပုဂၢဳိလ္မ်ား7 မှတ်ချက်
ရေအားကစား, ဆောင်းရာသီ, အပန်းဖြေ
ဇြန္လ 30, 2017 ဒီဇင်ဘာလတွင် 18, 2013 by ကလေးတွေကအဘို့အဘိဓါန်
အေ (ကုန်းဆင်း) နှင်းလျှောစီး
1 ။ skis
2 ။ နှင်းလျှောစီးဘွတ်ဖိနပ်
3 ။ ခညျြနှောငျ
4 ။ ထမ်းဘိုး
5 ။ Cross-တိုင်းပြည် skis
C. (ရေခဲ) စကိတ်စီးခြင်း
6 ။ (ရေခဲ) စကိတ်စီးခြင်း
7 ။ စကိတ်စီးအစောင့်
8 ။ ကိန်းဂဏန်းစကိတ်စီးခြင်း
9 ။ စွတ်ဖါး
10 ။ ပန်းကန် / ပန်းကန်ပြားပျံ sledding
11 ။ bobsled
12 ။ စနိုးဆိုင်ကယ်စီးနေသည်
13 ။ toboggan
1 ။ ရှကျလှေ
2 ။ ဘဝကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်
3 ။ ကနူးလှေ
4 ။ လျှော
5 ။ rowboat
6 ။ တက်
7 ။ ယပ်လှေ
8 ။ လျှော
အီး (အဖြူရေ) အပျော်ဖောင်စီးခြင်း
9 ။ ဖေါင်
10 ။ အသက်ကယ်အင်္ကျီ
11 ။ swimsuit / ရေချိုးဝတ်စုံကို
12 ။ မှောငျခမြကျြမှနျ
13 ။ ရေချိုးဦးထုပ်
G. အ snorkeling
14 ။ မျက်နှာဖုံး
15 ။ snorkel
16 ။ ယေကျတောငျမြား
အိပ်ချ် scuba ရေငုပ်
17 ။ စိုစွတ်သောဝတ်စုံကို
18 ။ (လေထု) တင့်ကား
19 ။ (ရေငုပ်) မျက်နှာဖုံး
20 ။ surfboard
21 ။ sailboard
22 ။ ရွက်
23 ။ ရေ skis
24 ။ towrope
25 ။ (ငါးဖမ်း) လှံတံ
26 ။ reel
27 ။ (ငါးဖမ်း) လိုင်း
28 ။ ပိုက်
29 ။ ငါးစာ
12...5လာမည့်→
အသက် - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျေါပွခကျြ